Yaa bixiyey telada lagu dhisay hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta NISA? | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Yaa bixiyey telada lagu dhisay hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta NISA?
Yaa bixiyey telada lagu dhisay hoggaanka dabagalka siyaasiyiinta NISA?
Xog dheeraad ah ayaa kasoo baxeysa ujeedada kadanbeysa magacaabista Hogaankan.
Hogaanka dhawaan ay hirgalisay Hay,adda Nabada sugiga NISA ayaa lasheegey in samaynta hoggaanka ay ka timid talo uu bixiyay,Taliyihii NSS ee xiligii Dowladii kacaanka Gen Ahmed Saleban Dafle oo bishi January 2020 yimid Magaalada Moqdisho isagoona la kulmay madaxweyne Farmaajo iyo Teliye Fahad Yasin ,wuxuuna kula taliyay inaysan marna ogolaan wax la yiraahdo xorriyad qowl iyo doorasho sida ay noo xaqiijiyeen ilo xog ogaal ah, isagoona tusaaleeyay in cadawga dowladda ay yihiin Siyaasiyiinta mucaaradka ah ayna waajibtahay in dabagal iyo cabsi galin joogto ah lagu hayo qaarna la dilo ama la xiro si kuwo kale ku quustaan.
si loo meelmariyo qorshan ayaa bilowgii February 2020 waxaa loo diray dalka Erteria 80 sarkaal oo laga Soo xulay urur diimeedka Al-ictisaam una badnaa dagaalyahanadii garabkii hubaysnaa ee Xisbul Islaami ee hogaamin jirey Xasan Daahir Aweys oo hada xabsi guri u ah DF, waxaana lasoo siiyay tababar culus oo ufududeyn kara fulinta howlgalada culus ee lagu beegsanayo qaar kamid ah siyaasiinta iyo saxaafada.
Ciidankan oo dib loosoo celiyay bishii June 2020 ayaa loo aasaasay in ay lashaqeeyaan hogaanka dabagalka Siyaasiyiinta waxaana madax looga dhigay G.Dhexe Abdullahi Dhere oo hore uga mid ahaa Garabka hubaysan ee Xisbul Islaami.
Xagee ka howlgalaa Hagaankaan?
Wuxuu ka howlgalaa gooba muhimka ah oo dhan sida Airport ,Dekedda, madaxtooyada, hotels ka iyo meel walba oo howl siyaasad kasocoto .waxay awood u leeyihiin inay airport ka kaceliyaan qofka ay rabaan waxaana ugu danbaysay inay Ex PM khayre ka celiyeen airportka isbuucii hore.
Ilo wareedyo muhiim ah ayaan kasoo xiganey in Hogaankan ay maalgeliso dowladda Qatar kuna bixiso lacag badan ayadoona qalabayn casri ah kusameysey.
Maqaal horeCiidamada DF Soomaaliya oo xiray waddooyinka magaalada Muqdisho
Maqaal XigaMaxaa sabab u ah cunno yarida ka jirta Soomaaliya?